के हामी साँच्चै कृषिप्रधान देश हौँँ त ? – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ विचार ∕ के हामी साँच्चै कृषिप्रधान देश हौँँ त ?
लक्ष्मण सिटौला मंसीर २६, २०७७ १४:२८
हामीले कसैसँग केही लिइरहेका छौँ वा कसैको केही खाइरहेका छौँ भने हामीलार्ई दिइरहनेले अवश्य नै हेप्छ । उसको हेपाइलाई हामीले चुपचापले सहनुको विकल्प पनि छैन । यदि त्यो हेपाइबाट मुक्त हुने हो भने उसको हातमाथि राख्न बन्द गर्ने । आयातकै करका भरमा खरबका बजेट बढाइरहनुको औचित्य छैन । बजेट सानो आकारमा बनाउनुस् तर निर्यात बढाउनुस् । आयात घटाउनुस् । निर्यात गर्दा उठेको करमाथि गर्व गर्नुस् अर्थमन्त्रीज्यू ! १६ अर्बको चामल आयात गर्दा लाज मान्नुस् नेताहरु ! तपाईहरु केवल पार्टीकै झगडामा पदका लागि कुस्ती लडिरहनुहुन्छ अनि देशले कसरी काँचुली फेर्न सक्छ ?